Jay Hos, Author at जय होस् – Page2of 527
संगीत । चर्चित रियालिटी शो ‘द भ्वाइस अफ नेपाल सिजन–३’का विजेता किरण गजमेर ‘राष्ट्रिय प्रतिभा सम्मान २०७८’ बाट सम्मानित भएका छन् । शनिबार राजधानीमा आयोजित एक कार्यक्रमका बिच डा. खगेन्द्र …
पुष्प र जिसुको यो कस्तो गीत ?
संगीत । नेपाली लोकसंगीतमा प्रयोग हुने गरेका शब्दमा बेला-बखत विवाद हुने गर्दछ । राष्ट्रिय लोक तथा दोहोरी गीत प्रतिष्ठानले पनि दोहोरो अर्थ दिने शब्दहरु प्रयोग नगर्नका लागि कलाकारलाई बारम्बार आग्रह …
देश । नेपालको बैदेशिक रोजगारीको इतिहास निकै पुरानो छ । भारत, बेलायत, सिंगापुर लगायतका मुलुकमा सेना र प्रहरी वा अन्य श्रमका लागि नेपाली युवाहरु रोजगारीका लागि जाने प्रचलन पुरानै हो …
‘कुनै समय’ सार्वजनिक
संगीत । ‘पहिलो माया’को सफलतापछि गीतकार पुनम मोथेले नयाँ गीत ‘कुनै समय’ सार्वजनिक गरेकी छिन । स्याड भर्सनको सार्वजनिक गीतमा हरि लम्सालको संगीत र राजीना रिमालको स्वर सुन्न सकिन्छ। गीतको …
फिल्म । पछिल्लो समय म्युजिक भिडियोमा रुचाइएको जोडी पल शाह र मलिका महतको जोडी ठुलो पर्दामा उदाउने भनिएको पनि लामो समय भइसकेको छ । ‘फूलबुट्टे सारी’ र ‘टाढा भए पनि’ …
फिल्म । पछिल्लो समय यशराज फिल्म्सले ठुला फिल्महरु निर्माण गरिरहेको छ । आफ्नो सफल फिल्मको नयाँ फ्रेनचाइजलाई खास अगाडी बढाईरहेको यशराज फिल्म्सले दर्शकको अपेक्षालाई पनि उत्तिकै ध्यान दिईरहेको छ । …